Iingcebiso ze-Semalt kwiindlela zokusebenzisa nokulawula i-Course yakho Wiki
Ukuba ngumntu oyedwa, i-Wiki iye yabangela inxaxheba kwimpumelelo kwimigangatho yezemfundo kumazwe amaninzi. I-Wikis inike ootitshala kunye nomfundi ithuba lokuhlela, ukufikelela, kunye nokwabelana ngolwazi oluhlanganyeneyo malunga neenfundo zemfundo. Zonke iikhosi ezenzileyo ziquka i-wiki enokukhawuleza isetyenziswe kwaye iguqulelwe ukuhambelana nezifundo ezahlukeneyo ezikhoyo kwicandelo lemfundo.
U-Max Bell, u-10 (Semalt oyingcali, uchaza ukuba ikhosi idlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni ubudlelwane phakathi kwabafundi nootitshala. Abaphengululi baye baxhasa ukusetyenziswa kwee-week course ezikolweni njengoko kunceda ekusebenzeni ngokukhawuleza kwekharityhulam. Nazi izinto eziqhelekileyo ezenziwa yi-week course:
Ukwabelana kunye nokubonelela ngemibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ), kunye nokuqokelelwa kwezinto ezintsha
Ukwabelana ngezikhokelo kunye nemiyalelo ekuqaleni kwekhosi
Ukubonelela nokuhlalutya izikhokelo zokufakelwa kwesoftware
Ukuqokelela iziphakamiso zokuphucula iinkcukacha zekhosi
Umgaqo wokuqokelela, ukwabelana, nokuhlela amaqaku e-wiki kukunceda kakhulu ekuhlanganiseni ulwazi kwi-repository. Ingxelo ehleliweyo isebenza njengomthombo wolwazi lomntu kwabanye abasebenzi kunye nabafundi. Ukusebenzisa ukwabelana kunye nokuhlalutya i-FAQs kukukhuthaza ukusebenzisana kunye nokuphuhliswa kweeprojekthi zekamva.
Iingcebiso malunga nendlela yokulawula i-Course Wiki
Ukulawula ikhosi yakho ibandakanya ukuzinikela nokuzinikezela. Nazi izicwangciso malunga nendlela yokuphatha i-wiki yakho ngokufanelekileyo:
Bonisa kwaye uchaze iindima ezahlukileyo eziza kwenziwa ngabantu abahlukeneyo. Ngokomzekelo, xa kuziwa ekususeni iziqendu ze-wiki, makungabikho indima yabasebenzi kodwa bangabafundi..
Bonisa iinkalo ezifuna ukubambisana kwabafundi ukuphepha ukudideka. Abafundi kufuneka banikwe indima yokuhlela kwaye benze ama-wiki athikili.
Yibani ngokuchanekileyo ngenjongo yeenxalenye zekhosi yakho iviki. Ukuba ezinye zeengxenye zakho zeeviki zentsuku zenzelwe ukusabalalisa idatha kunye nolwazi, vumela abafundi bakho ukuba bangene kwizinto.
Abasebenzi bekhosi baqhuba imisebenzi eyahlukeneyo kunye neendima kwi-week course. Nantsi imisebenzi eqhelekileyo eyenziwa ngabasebenzi bekhosi ukulawula i-wiki:
Ukubuyisela nokulondoloza i-Wiki
Xa ugcina ikhosi yakho iviki, thintela ukucoceka inqaku elingasetyenziselwa iireferensi ezizayo. Emva kokususa izinto, ikhonkco ebonakalayo ihlala apho yenziwe khona. Ukubuyisela i-Wiki Article, nqakraza kwi-'Buyisela 'iqhosha eliboniswe kwisikrini.
Ukususa i-Wiki Article
Amalungu enkcazo angasusa kuphela amanqaku e-wiki kunye nemvume yokuhlela eli nqaku. Ukucima itekisi kwikhosi yakho ye-Wiki, hamba i-athikili ukuba isuswe uze uchofoze iqhosha elithi 'Hlela'. Skrolela phantsi kwaye nqakraza kwi- 'Susa iCandelo' kwaye ukhethe 'Ewe' ukuqinisekisa ukucinywa kwinqaku.
Ukulawula ukufikelela kwi-Course Wiki
Abasebenzisi bangakwazi ukulawula ukufikelela kwikota yekhosi ngokubhala izilungiso zeemvume zecandelo okanye ngokuvala amanqaku atholakalayo. Ukulawula ukufikelela, vula kwi 'Izicwangciso' kwaye nqakraza kwi 'Izicwangciso eziPhambili.' Ukuguqula ukufikelela kwekhosi ye-course ngokuvumela amaqela karhulumente ukuba afinyelele i-wiki.
Ukugcina nokuvala i-Wiki Article
Ukufumana iziphumo ezichanekileyo kwikhosi yakho ye-Wiki, yenza ezinye iinqununu ukumela umgca wakho wekhosi. Ukubonelela iinqununu kwiqela lakho eliphambili kunye nee-FAQ kwicandelo ngalinye elimele likhutshwe Source .